Iyo isina kuonda simbi isina tsvina pasi rose inongova 0,015 mm gobvu: yakagadzirwa muChina - China Foshan Hermes Simbi
Sekureva kweshumo razvino kubva kuCCTV, yazvino "ruoko-rwekubvarura simbi" yakaburitswa neChina Baowu Taiyuan Iron uye Simbi Boka rakatetepa kupfuura bepa, girazi-rakafanana, uye rakaomarara zvakanyanya mukugadzirwa. Iyo ukobvu ingori 0.015 mm chete. Dura remashizha esimbi manomwe ipepanhau. ukobvu.
Zvinonzi iyi ndiyo simbi isina mutete yakatetepa pasi rose parizvino, uye inogona kushandiswa sekugadzirisa zvinhu muchip mune ramangwana, saka inonziwo "chip simbi."
Kugadzira iyi mhando ye "chip simbi", kiyi iri mune kurongeka uye kusanganiswa kwemabhureki emabhureki mune iyo turnstile. Baowu Taiyuan Iron uye Simbi Boka raita 711 kuyedza uye kuyedza anopfuura makumi mana emarudzi emhando yemabhureki emabhureki kwemakore maviri azere. Mushure mezvinobvumirwa mvumo uye mubatanidzwa, gedhi resimbi isina chinhu rakagadzirwa kusvika pakukora kwe0.02 mm, kutyora tekinoroji yekunze monopoly.
Kutanga muna Chivabvu gore rapfuura, Taiyuan Iron uye Simbi yakaramba ichiita tsvagiridzo yesainzi uye tekinoroji pane izvi, uye mushure memazana angangoda kuedza, yakazochera simbi isina waya kusvika ku0.015 mm.
Pamusoro pechip kugadzira, iyi "chip simbi" inogona zvakare kushandiswa kune ma sensors ari muchadenga nzvimbo, mabhatiri emagetsi matsva zvigadzirwa, uye kupeta skrini mbozhanhare.